HALATR’OMBY ANY ATSIMO : « Mbola misy mpanao politika manao lava tanana miaro ireo dahalo »
Anisan’ireo Faritra mena amin’ny asan-dahalo, indrindra fa ny halatr’omby ny tapany atsimon’ny Nosy iny. Manamora ny asa ratsin’ireo malaso ny fisiana olom-panjakana voatendry na voafidy miaro azy ireo. 19 avril 2022
Raha ny tatitra farany azo avy amin’ny Zandarimariam-pirenena dia azo lazaina ho efa mihena ny trangana halatr’omby any amin’ireo Faritra mandrafitra ny tapany Atsimon’ny Nosy iny amin’izao fotoana. Nahitam-bokany ny fisian’ilay hetsika Tagnamaron’ny fandriam-pahalemana izay notanterahina hoentina hanafoanana ny trangana tsy fandriam-pahalemana mivaivay any Atsimon’ny Nosy iny. Hatreto, nahitana fihenany hatrany amin’ny 70% ny trangana halatr’omby raha toa kosa ka hatrany amin’ny 80% ireo omby tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony.
Tao anatin’ny fotoana nisian’ny hetsika, izany hoe, tato anatin’ny enim-bolana farany ho an’ny taona 2021 dia trangana halatr’omby miisa roa no nisy izay nahaverezana omby 56 isa. Taorian’ny hetsiky ny Zandary dia tafaverina soa aman-tsara amin’ny tompony ny 46 tamin’ireo omby very. Hatramin’ny niandohan’ny taona 2022 kosa, ho an’izay telo volana voalohany izay dia roa ihany koa ny tranga nisy, ka omby miisa 91 no very raha toa ka tafaverina avokoa ny 73 tamin’ireo. Zandary iray no fantatra fa namoy ny ainy rehefa nisy ny fifandonana, ankoatra ireo olon-tsotra sy mpanara-dia naratra. Mbola mitohy io hetsika fampandrian-tany any Atsimo io. Paikady voalohany napetraka ny fametrahana mpitandro filaminana eny amin’ireo zohy fitobian’ny dahalo.
Misy mpanao politika miaro
Rehefa raikitra ny fifanenjehana dia saika ireo dahalo mpanatanteraka ny fanafihana mivantana hatrany no tratra sy voasambotra fa ireo tena atidoha mpandray ny omby halatra, mpamatsy fitaovana sy mpanome baiko mbola tsy misy tratra hatreto. Hentitra ny Solombavambahoakan’ Androy, Henri Jean Michel sady Kestora voalohany eny anivon’ny Antenimieram-pirenena raha nilaza fa misy mpanao politika matanjaka be ao ambadik’ireo dahalo. Ity farany no miaro sy manao ny fanelanelanana eny anivon’ny Fitsarana ka afaka mora foana ireo dahalo voasambotra. Nambarany fa nisy dahalo miisa dimy voasambotra rehefa natao ny fanadihadiana dia mpiara-miasa akaiky amin’io mpanao politika io avokoa izy rehetra ireo. “Malaza ny any Atsimo any amin’ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Mazava ho azy fa tsy olona avy aty Antananarivo no hanao ny fiambenana amin’izay ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana izay fa ny Kaomandin’ny vondron-tobim-paritra no tokony hanao izany. Misy olona anefa mahazo tombontsoa manokana amin’ny asan-dahalo ka mahatsiaro ho voatohintohina izy amin’ny tsy fandriam-pahalemana any Atsimo any. Misy mpanao politika matanjaka ao an-damosin’ireo olon-dratsy, rehefa voasambotra ireo dahalo dia mpiara-miasa akaiky amin’ity mpanao politika ity avokoa izy dimy miralahy”, hoy ny fanazavany. Fantatra ankehitriny ny fisian’ireo mpanao politika sasany manao ity asa maloto ity. Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta no efa nanome toromarika amin’ny hampitsaharana izany faran’izay haingana, saingy, hatreto mbola mahazo vahana hatrany ry zalahy.
Manelanelana eny amin’ny Fitsarana
Mahagaga, raha ny voalazany hatrany, fa afaka amin’ny fomba mora foana izy ireo rehefa tonga eny amin’ny Fitsarana izay mampanahy ihany amin’ny fisiana kolikoly avo lenta. Io mpanao politika io no miara-dalana amin’ny dahalo sy miaro azy ireo ka mahavita manao fanelanelanana eny anivon’ny Fitsarana sy nanao tsindry ka nahatafavoaka azy ireo rehefa voasambotra. “Resa-bola ve ? Sanatriaviko sa resaka fahatahorana ve no tsy hampiharana ny lalàna, sa resaka tsindry bokotra manao ahoana loatra ? Ohatra ratsy eo amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana izany”, hoy hatrany izy. Misy ve ny olona ambonin’ny lalàna eto amin’ny Firenena ? Mbola manaiky ny hatao fitaovana tahaka izany hatrany ve ny Fitsarana raha toa ka tena mitombina avokoa izay rehefa voalazan’ity Solombavambahoaka ity ? Manoloana izany indrindra no anaovany antso avo amin’ny Fanjakana ny tokony hijerena manokana an’ity tranga ity. Tanjona, hoy izy, ny tsy hampirongatra toy ny teo aloha ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay nampalaza ratsy an’iny faritra atsimon’ny Nosy iny. Voalaza fa efa mihatsara izany ankehitriny vokatry ny asan’ny mpitandro filaminana. Ankoatra izay, isany anaovany antso manokana ihany koa ny tokony hijerena ireo mpanera sy ireo mijoro ho mahalala olona eo anivon’ny Fitsarana ka mampiraviravy tanana ny vahoaka ankehitriny.
Ankoatra ny halatr’omby sy ny fanafihana tanàna dia mahavita mandatsak’aina amin’ny fomba feno habibiana ihany koa ireo olon-dratsy. Araka ny tatitra ofisialy avy amin’ny Zandary hatrany dia raim-pianakaviana mpandraharaha ara-barotra iray avy naka entana no nisy namono tao amin’ny Distrikan’i Kandreho ao anatin’ny Faritra Betsiboka. Ny alin’ny alatsinainy teo no nisehoan’ity tranga ity. “Ny alatsinainy alina tamin’ny 8 ora sy sasany dia nahazo antso ny Zandary tao Maevatanàna fa misy mpandraharaha iray izay novonoin’olona tamin’ny lalana mankany Kandreho iny. Taitra ny Zandary dia nanara-dia ka misy olona telo voasambotra izay voatazona any Maevatanàna. Raha ny fanadihadiana savaranonando natao dia tsy misy zavatra nalain’ireo jiolahy afa-tsy ny peratra teny an-tanan’ilay mpandraharaha sy ny finday teny an-tanany”, araka ny tatitra avy amin’ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena avy ao Maevatanàna. Tao anatin’ny fanadihadiana izay ihany koa no nahafantarana fa valifaty no antony nahatonga ity famonoan’olona ity.